Harowo.com | HarawoNews – Somalia Information & Analysis – Khatar Cusub:- Cudur Fara Ba’an Ku Haya Shacabka Muqdisho Oo Haleelay Wasiiro, Xildhibaano Iyo Madax Kale
Jun 14, 2016 SOMALI NEWS 0
Harowo – Waxaa magaalada Muqdisho iyo deegaano ka tirsan koonfurta Somalia ku soo badanayay bilahan dad uu soo ridanayo cudur ay Soomaalidu ula baxday Kaduudiye oo haleela xubnaha kala goysyada jirka bani’aadamka.
Hebel aaway maalmahana muuqiisa ma arage?..maba ogid miyaa…maya.. waxaa ku dhacay kaduudiye, ereyadaan iyo kuwa kale waxay maalmahan noqdeen kuwa loogu hadal heynta badan yahay magaalada Muqdisho.
Cudurkan oo Somalia markii ugu horeysay lagu arkay sanadkii 2005-tii ayaa toban sano ka dib mar kale ku soo laabtay dalka waana cudur Soomaalidu aysan wax badan ka fahamsaneyn noociisa iyo waxa uu asal ahaan yahay.
Dad badan ayaa cudurkan u geeriyooday ka dib markii ay qaateen daawooyin ama cirbado antipiotics ah oo dhaqaatiirtu ay ka digeen in la isticmaalo marka cudurkan la isku arko.
Magaalada Muqdisho haddii aad joogto waxaa maalin walba ku soo dhacaya dhegahaaga dad cusub oo cudurkan uu ku habsaday, waxaana arinta ugu xiisaha badan ay noqotay xubno ka tirsan golaha wasiirada, xildhibaano iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan dowlada oo laga waayey xafiisyada ka dib markii uu haleelay cudurkankan oo madax, maato cid uu cafiyeyba aysan jirin.
Qaar ka mid ah dhaqaatiirta ayaa sheegay in cudurkan lagu arkay wadanka Kenya markii ugu horeysay sanadkii 1950-kii magaca saxda ee xanuunkana waa (Chikungunya) waxayna xuseen in xanuunkan uu keeno jeermiska loo yaqaano fayraska, waxaana lagu kala qaadaa qaniinyada kaneecada, waa sida malaariyada oo kale.
Calaamadaha ugu badan oo uu qofka dareemo waxaa ka mid ah sida dhaqaatiirtu sheegeen qandho daran, kalagoysyo xanuun, kalagoysyo barar, madax xanuun iyo murqo xanuun, marmarka qaar wuxuu wataa faruuruc jirka ka soo yaaco.
Magaca xanuunka ee (Chikungunya) asal ahaantiisu waa luqadda sawaahiliga, macnihiisuna waa: (Qallooc u socod), qofka xanuunkan qabo si toos ah iskuma toosin karo markuu soconayo, waa inuu is qalloociyaa xanuunka dartiis sida dadka cudurkan uu haleelay lagu arkay.
Waa xanuun si sahlan ugu faafi karo meelo cusub, waxaa la sheegay in Mareykanka oo aan laga aqoonin xanuunkaan uu gaaray sanadkii 2013, lana aamisan yahay in laga soo dhoofiyay bariga afrika!!.
Dhaqaatiirta ayaa sheegaya in xanuunkan badanaa dilaa uusan ahayn, laakiin qofka dhowr maalmood ama dhowr todobaad uu howlgab ka dhigo, mana ahan xanuun tallaal iyo daawo toona leh, waxaa ugu muhiimsan in qofka xanuun baab’iye iyo qandho jabiye u qaato inta uu xanuunka ka gudbayo, waa inuu qofka cabo biyo badan si uu uga fogaado halista fuuqbaxa, waana inuu ku dadaalo nasiino.
kenya, Magaalada Muqdisho, Somalia
Ilahay Ayaa Iga Bad'baadiyay ,marbay Midgaankaa U Dhali Gaadhay, Anigana Ii Dhali Gaadhay Sideen Ugu Diyaargarownaa Bisha Ramadaan W/Q :Maxamuud Maxamed (Abucubayda)